Usoro ọrụ - Ebe Mmebe
Akwa mkpuchi isi
Menu Site igodo
Item kwukwara na ụgbọ ibu. View ụgbọ ibu na lelee.
30% Gbanyụọ + Mbupu efu - Jiri koodu: ire ere
Ebe nrụọrụ weebụ a na-arụ ọrụ site na Designer Spot. N'ime saịtị ahụ niile, okwu ahụ "anyị", "anyị" na "anyị" na-ezo aka na Onye Mmebe Ihe. Mmebe Abù awade a website, gụnyere ihe niile ozi, ngwá ọrụ na ọrụ dị site na saịtị a ka ị, onye ọrụ, oyi n'elu gị nabata niile usoro, ọnọdụ, atumatu na ọkwa kwuru ebe a.
Site na ịga na saịtị anyị na / ma ọ bụ ịzụta ihe n'aka anyị, ịbanye na "Ọrụ" anyị ma kwenye na agbanyere gị na ọnọdụ na ọnọdụ ("Usoro nke Ọrụ", "Usoro"), gụnyere ndị ọzọ na ọnọdụ na iwu ndị ọzọ. edere ya na / ma ọ bụ dị site hyperlink. Usoro Okwu a na-emetụta ndị ọrụ niile nke saịtị ahụ, tinyere ndị ọrụ na-enweghị njedebe bụ ndị na-eme nchọgharị, ndị na-ere ahịa, ndị ahịa, ndị ahịa, na / ma ọ bụ ndị na-akwado ọdịnaya.
NIILE 5 - AKWCTKWỌ ORM OR ỌM ORAKA
Ngwaahịa anyị niile bụ Nna-ukwu Nnomi site na ikwenye n'okwu a ị na-ekweta na ngwaahịa ịzụrụ bụ ihe oyiri. Productsfọdụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nwere ike ịdị naanị n'ịntanetị site na weebụsaịtị. Ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ndị a nwere ike ịnwe oke na ha ga-alaghachi ma ọ bụ gbanwee naanị dabere na Iwu Nloghachi anyị.
Onweghi ihe mmebe Designer, ndi isi anyi, ndi isi anyi, ndi oru anyi, ndi ozo, ndi oru, ndi oru, ndi ulo oru, ndi na enye ahia, ndi n’enye oru ma obu ndi na enye ha ikike gha enwe ntaramahuhu, njo, nkwuputa, ma obu uzo ozo. ma ọ bụ mmebi ọ bụla nwere nsogbu ọ bụla, gụnyere, na-enweghị mmachi uru furu efu, ego furu efu, nchekwa furu efu, ọnwụ data, ụgwọ ngbanwe, ma ọ bụ mmebi ọ bụla yiri ya, ma ọ dabere na nkwekọrịta, mmekpa ahụ (gụnyere ileghara anya), ụgwọ siri ike ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, na-esite iji ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla ewepụtara site na iji ọrụ ahụ, ma ọ bụ maka nkwupụta ọ bụla ọzọ metụtara n'ụzọ ọ bụla iji ọrụ gị ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla, gụnyere, mana ọnweghị oke, njehie ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla na ọdịnaya ọ bụla, ma ọ bụ mfu ọ bụla ma ọ bụ mmebi n'ụdị ọ bụla dakwasịrị n'ihi iji ọrụ ahụ ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla (ma ọ bụ ngwaahịa) ezitere, nyefee, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ ewepụtara site na ọrụ ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na a dụọ ha ndụmọdụ banyere ohere ha nwere. N'ihi na ụfọdụ steeti ma ọ bụ ikike anaghị ekwe ka mwepu ma ọ bụ njedebe nke iwu maka ihe ọghọm ma ọ bụ mmebi mebiri, n'ụdị steeti ma ọ bụ ikike ndị ahụ, ụgwọ anyị ga-ejedebe ruo oke iwu nyere ikike.
Agree kwenyere ịkwụ ụgwọ, chebe ma jide onye mmebe Designer na-adịghị emerụ ahụ na nne na nna anyị, ndị enyemaka, ndị mmekọ, ndị mmekọ, ndị isi ọrụ, ndị isi, ndị isi, ndị ọrụ, ndị ọrụ ngo, ndị ọrụ ikikere, ndị na-enye ọrụ, ndị na-arụ ọrụ n'okpuru, ndị na-eweta ọrụ, interns na ndị ọrụ, enweghị mmerụ ọ bụla na-ekwu ma ọ bụ na-achọ, gụnyere ụgwọ ndị ọka iwu nwere ezi uche, nke onye ọ bụla ọzọ mere n'ihi ma ọ bụ na-esite na ngabiga nke Usoro Ọrụ a ma ọ bụ akwụkwọ ha tinye site na ntụaka, ma ọ bụ mmebi iwu ọ bụla ma ọ bụ ikike nke ndị ọzọ.
Usoro ọrụ ndị a yana nkwekọrịta ọ bụla dị iche iche anyị ji enye gị Ọrụ ka a ga-achịkwa ma rụọ ya dịka iwu nke Dubai marina Dubai Dubai AE 282370.
Ajuju gbasara Usoro Ọrụ ka ezigara anyị na info@dznrspot.com.
Mepụta nlọghachi ma ọ bụ mgbanwe
Nkwalite, ngwaahịa ọhụrụ na ahịa. Kpọmkwem na igbe mbata gị.
2022, Mmebe Abù.